ई-पुस्तकहरू झन् परम्परागत कागज प्रकाशनहरू प्रतिस्थापन, हाम्रो जीवन को भाग हो। यो किन छ? पहिले, यो सुविधाजनक छ, र दोश्रो कुरा, एउटा सानो यन्त्रमा विविध साहित्य को एक विशाल लाइब्रेरी, आफ्नो मनपर्ने कवि को संकलित काम गर्न प्राविधिक मैनुअल देखि सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। एक eBook के हो? शायद तिमी उनको बारेमा सबै कुरा थाहा छैन ...
गोली कम्प्युटर, पाठ जानकारी प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको छ जो - विद्युतीय पुस्तक एउटा पोर्टेबल उपकरण हो। यी ग्याजेटहरू ट्याब्लेट र netbooks चलिरहेको समय र सीमित कार्यक्षमता फरक छन्। हाम्रो समय मा ई-पुस्तक, पहिले नै चारैतिर फैलियो छ भन्ने तथ्यलाई। तर यी उपकरणहरू 1998 मा देखा पर्नुभयो र एलसीडी स्क्रीन संग सुसज्जित, तर व्यापक लोकप्रिय छैन। प्रविधि ई-इंक पुस्तक-पाठकहरूलाई मा नयाँ जीवन प्रेरणाबाट। यो एकदम उपकरणहरू को ऊर्जा खपत कम र स्क्रिनमा पाठ प्रदर्शन गुणस्तर सुधार भएको छ। त्यो समय देखि, इलेक्ट्रोनिक पढाइ उपकरणहरू बढ्छ, र निर्माताहरु को बिक्री पाठ फाइल प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता सीमित छैन।
आधुनिक समयमा एक ई-पुस्तक के हो? यो अद्वितीय प्रविधि, जो कागज अधिकतम गुणस्तर को वास्तविकता प्रसारित गर्न अनुमति दिन्छ। कागज-जस्तो प्रदर्शन फ्लैश छैन, त्यसैले सबै भन्दा सुविधाजनक उपकरण गर्न पुस्तक पढ्न गर्दैन। एक ब्याट्री चार्ज 10,000 पृष्ठ पढ्न पर्याप्त छ। तपाईं सँगै एक पुस्तक पढ्न चाहनुहुन्छ भने, व्यापक पढाइ कोण यसलाई राम्रो तरिकाले तनाव बिना गर्न अनुमति दिन्छ। Bumagopodobnye ई-पुस्तकहरू उपकरण सुरक्षित सडक लाग्न सक्छ त तपाईं, ब्याट्रि चार्ज बारेमा भूल गर्न अनुमति दिन्छ।
आज इ-पुस्तक पुस्तकालय - धेरै ठूलो छ। प्रदर्शन ई-पुस्तक चयन गर्न 6-6,4 इन्च तिनीहरूलाई पढ्न सुविधाजनक थियो राम्रो छ। तिनीहरूले भन्न रूपमा आन्तरिक मेमोरी, त्यसपछि यहाँ, को लागि को रूप मा, थप - यस मामला मा राम्रो, तर chasing गिगाबाइट छैन यो लायक छ। तपाईं मात्र, त्यसपछि पदहरू पढेको लागि ई-पुस्तक किन्न चाहनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, 100-500 पुस्तकहरू स्मृति 512 एमबी कब्जा हुनेछ। साथै, ई-पुस्तकहरू लागि एसडी र microSD स्मृति कार्ड स्लट छ। केही मोडेल जो तपाईंलाई 16GB र थप गर्न स्मृति अप वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, आजको ई-पुस्तकहरू ढाँचा समर्थन mp3, त्यसैले तपाईं संगीत वा अडियो पुस्तकहरू कुनै पनि समस्या बिना सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै, उपकरणमा फोटो हेर्न गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ jpg ढाँचा।
पहिलो पटक कम्पनी एक ई-पुस्तक Softbook प्रेस र NuvoMedia जारी। यी उपकरणहरू लागि मिति, अब बजार मा, र तिनीहरूले स्क्रिन Kindle मोडेल ई-इंक, सोनी प्रतिस्थापन थिए, एक दर्जन विभिन्न मोडेल जारी गरेको छ, र मध्यम मूल्य दायरामा तपाईं पाउनुहुनेछ PocketBook, Wexler र TEXET।
हाम्रो दिन को एक ई-पुस्तक के हो? बिस्तारै ट्याब्लेट कार्यक्षमता को मामला मा आउँदै छ जो यो उपकरण। उदाहरणका लागि प्रयोग सञ्चालन प्रणाली, लिनक्स। त्यसैले पदहरू पढेको - यो सिर्फ प्रदर्शन गर्न सक्ने ई-पुस्तक आफ्नो धेरै कार्यहरु को छ। यस्तो उपकरणहरू को मूल्य, को पाठ्यक्रम, पारंपरिक उपकरणहरू भन्दा धेरै उच्च पाठ प्रदर्शन गर्न।
HTC नेक्सस ट्याब्लेट932Gb एलटीई: सिंहावलोकन, वर्णन र मालिकको समीक्षा
SENNHEISER - जर्मनी ले वायरलेस हेडफोनको
जो ट्याब्लेट आधुनिक मानिस चयन गर्न?
गोली "एसस": समीक्षा। शीर्ष प्लेट "एसस» (ASUS)। , लागत विशेषताहरु
आफ्नो आईप्याड किन समावेश छैन र यस्तो अवस्थामा के गर्ने?
प्लेट झुन्डिएको - के? सम्भावितकारण र समाधान
Gymnasts जस्तै प्रेस स्विंग? gymnasts प्रेस लागि खेती
2008 - रूस र संसारमा संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था लागि यसको नतिजा। कारण र अवस्था: 2008 वैश्विक वित्तीय संकट
चयन गर्न पूर्व-कसरत पेय के हो? शीर्ष 10 सबै भन्दा राम्रो परिसर
64-बिट सिस्टम: एक 32-बिट संस्करण र विपरित देखि सार्न कसरी
कालो दस्त: कारण, उपचार, लक्षण, आहार
Asthenic सिंड्रोम - यो के हो? कारण र थकान को लक्षण
सुविधाहरू, व्यञ्जनहरु र समीक्षा को प्रयोग: मानव शरीर को लागि हानि र समुद्र buckthorn को लाभ
मास्को विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ: र्याङ्किङ्ग
शीर्षकहरू पाठ्यक्रम मनोविज्ञान काम। कसरी मनोविज्ञान मा एक शब्द कागज लेख्न
Rocs (जेल remineralizing): समीक्षा र पुस्तिका
दबाइ Surgiderm 30 XP: प्रभाव समीक्षा